Mausoleum near Shwedagon Pagoda - Yangon Thu Michelle
Mausoleum near Shwedagon Pagoda
Places and landmarks, Video Aug 03, 2018
ဒီတစ်ခါရန်ကုန်သူမီရှဲကရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုခ်ခြေရင်းမှာရှိတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဂူဗိမာန်လေးခု (mausoleum near Shwedagon Pagoda) ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ထွေထွေထူးထူးကြည့်စရာမရှိပေမယ့် ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ချင်းစီအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တော့ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူ၊ ရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းအပြည့်ကိုယ်စီနဲ့ပါ။ ဒီလူတွေကိုလေးစားအတုယူရအောင် အမြဲအမှတ်ရနေအောင် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။
ဖွင့်တဲ့အချိန်တွေကတော့ မနက်ဆယ်နာရီကနေ ညနေလေးနာရီအထိ ပိတ်ရက်မရှိဖွင့်ပါတယ်။ နေရာတစ်နေရာကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင် ပတ်သတ်သမျှကို ရှာဖတ်ကြည့်ကြည့်ပါ။ မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ ဆက်စပ်ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ မီရှဲဆို သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအကြောင်း သိပ်မသိပါဘူး။ သူ့ရဲ့စာတွေက ဖတ်မိဖို့အလှမ်းဝေးတာရယ်၊ ပတ်သတ်တဲ့စာအုပ်ကလည်း အလွယ်တကူမဖတ်ရတော့မဖတ်မိဘူး။
အခုတော့ လိုက်လေ့လာနေတုန်းပါ။ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ သိတဲ့လူများပါတယ်။
ဦးသန့်အကြောင်းကတော့ https://www.facebook.com/yangonthumichelle/videos/941726212654213/ မှာ တစ်ခါပြောပြထားဖူးပါတယ်။ ဗီဒီယိုအချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းအများကြီး မပြောလိုက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရောက်ဖြစ်ရင် ဝင်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါဦးနော် … ။
နောက်အပတ်တွေမှာလဲ ဘယ်လိုုအကြောင်းအရာပြောမလဲ။ ဘယ်ကိုသွားမလဲ စောင့်မျှော်ပေးပါဦးနော် …
In this week, I haveachance to go and pay respect to the mausoleum near Shwedagon Pagoda. Here lies, Thakin Kodaw Hmaing, Daw Khin Kyi (mother of Daw Aung San Suu Kyi) and U Thant.
Thakin Kodaw Hmaing is considered one of the greatest Burmese poets, writers and political leaders in the 20th century history of Burma. He is regard as the Father of Burmese nationalist and peace movements. Thakin Kodaw Hmaing is literary genius, he published hundreds of articles.
Maha Thiri Thudhamma Daw Khin Kyi is Myanmar politician and very first woman diplomat for Myanmar. She is best known to marriage to General Aung San. She is mother of Daw Aung San Suu Kyi.
Supayalat, also spelt Suphayalat, is the last queen of Burma who reigned in Mandalay.
U Thant is former diplomat and third United Nations Secretary, the very first non-Scandinavian hold that position.
The mausoleum is open daily start from 10 AM to4PM.